Inkukhu isongele ibhatata emhlophe - Goodao Technology Co, Ltd.
I-chicken jerky kunye ne-potato zezona zinto ziphambili ziphambili ziyinyani kwaye zisempilweni. Unyango alunayo ingqolowa, ingqolowa, isoya okanye igluten. Olu nyango lwe-jerky alukho i-rawhide kunye neebhatata ezenza ukuba unyango lube lula. Zonke izinja ezinobukhulu ziya kulonwabela olu nyango lumnandi kwaye kulula ukuba lwaphulwe lube ngamaqhekeza amancinci kwizilwanyana zasekhaya.
Iprotein yeCrube: 15% min
I-Crube Fat: 1.5% ubuninzi
I-Crube Fibre: 4.5% ubuninzi
I-Ash ekrwada: 3.5% ubuninzi
Igama leemveliso Inkukhu isongelwe ngetapile emnandi
Imveliso ephambili Inkukhu, ibhatata emnandi
Silandela umgaqo wokulawulwa "Umgangatho ngowona mgangatho uphezulu, iiNkonzo ziphezulu, ukuthandwa kuqala", kwaye kuya kudala ngokunyanisekileyo kwaye sabelane ngempumelelo kubo bonke abathengi nge-100% yoqobo yaseChina Organic Soft. Isongelo senkukhu Iitapile ezimnandi Ukutya kwezilwanyana zasekhaya Ukutya okomileyo kwezinja, Siyabamkela abathengi abatsha nabadala ukuba banxibelelane nathi ngeselula okanye basithumelele imibuzo ngeposi yemibutho yamashishini amancinci yexesha elide kunye nokufumana impumelelo efanayo.
I-100% yoqobo yaseChina yokutya kwezilwanyana ezomileyo kunye nexabiso lokuPhathwa kwePet Pet eyomileyo, inkampani yethu ihlala ngombono wolawulo "wokugcina izinto ezintsha, ukulandela ukugqwesa". Ngesiseko sokuqinisekisa izibonelelo zorhwebo esele zikhona, siyaqhubeka ukomeleza kunye nokwandisa uphuhliso lwemveliso. Inkampani yethu inyanzelisa izinto ezintsha ukukhuthaza uphuhliso oluzinzileyo lweshishini, kwaye isenze sibe ngabanikezeli abakumgangatho ophezulu basekhaya.
Egqithileyo Uxinzelelo lwe-10 cm kunye nodaka lwenkukhu
Okulandelayo: I-sandwich yenkukhu
Isongelo senkukhu Iitapile ezimnandi
Inkukhu isongele intonga eluhlaza